रोमिङ मा संचार सेवा को लागत घटाउने मोबाइल संचालक बाट प्रस्ताव, सदस्यहरू बीच बेतहाशा लोकप्रिय छन्। कसैले देश बाहिर अक्सर काम गर्न छ, र कसैले नातेदार वा छुट्टी मा यात्रा। यसलाई जो थियो, गृह क्षेत्रमा आफ्नो आगमन जडान विच्छेद हुनुपर्छ वा महसुल विकल्प लाभदायक अनुमति परे कुराकानी। अन्यथा, अतिरिक्त लागत वा यसको नेटवर्कमा कल को ठूलो लेख्ने-ओफ जोगिन छैन।
कम्पनी आफ्नो ग्राहकहरु "मेगाफन" र गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ मा अनुकूल संचार को संभावना प्रदान गर्दछ। यस मामला मा, तपाईं पनि चयन गर्न सक्नुहुन्छ: को महसुल "विश्व भरिको" जडान वा एउटै नाम को एक अतिरिक्त विकल्प सक्रिय गर्न चाहे। वास्तवमा, यी दुवै विकल्प पर्याप्त प्रति आगमन / बहिर्गमन कल को मिनेट, र पाठ सन्देशहरू पठाउने लागत कम। तपाईं पहिले नै कम्पनी "मेगाफन", "विश्व भरिको" बाट प्रस्तावहरू एक प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तुरुन्तै आफ्नो देश आफ्नो फिर्ती पछि यसको मूल्य असक्षम। तर, यदि हामी महसुल योजना बारेमा त यसलाई देखि आवश्यक छैन नत्याग्ने कुरा गर्दै छन् (यसको लागि मासिक शुल्क छैन, तर फेरि उपयोगी उहाँले शायद)। तल, यस लेखमा हामी तपाईं कसरी "मेघाफोन" "विश्व भरिको" प्रस्ताव कम्पनी बारेमा थप पढ्न सक्नुहुन्छ देखाउने छौँ। सम्पर्क केन्द्र वा कार्यालय को अपरेटर को सहायता संग, तिनीहरूलाई असक्षम तपाईं गर्न सक्छन्।
"विश्व भरिको" सेवा
तपाईं त्यहाँ सेवाहरू रोमिङ समय को लागत कम गर्न आवश्यक छ अवस्थित महसुल योजना परिवर्तन गर्न कुनै इच्छा छ भने, तर, यो कम्पनी "मेघाफोन" "विश्व भरिको" विकल्प सक्षम राम्रो छ। असक्षम यो आफ्नो देश फिर्ती पछि हुनुपर्छ। यो सदस्यता शुल्क को रद्द देखि सुरक्षित हुनेछ। विकल्पहरू सर्तहरू:
सेवाको लागि दैनिक शुल्क -9rubles एक दिन;
जडान विकल्पहरू लागि एक पटक शुल्क - 15 rubles।
यस मामला मा, कल को लागत हुनेछ: 13 (डेनमार्क, Georgia, साइप्रस, आदि); 19 (मिश्र, जापान, थाइल्याण्ड र यसको अगाडी।) अनि 43 rubles (चीन, आदि देश)। देशहरूको पूर्ण सूची मोबाइल अपरेटर गरेको शेयर मा हेर्न सकिन्छ। व्यक्तिगत कार्यालय मार्फत वा ग्राहक सेवा कर्मचारी मार्फत, USSD-आदेश * 105 * 708 # मार्फत जडान वास्तवमा विदेश पठाउनु अघि ( "मेघाफोन") "विश्व भरिको" सेवा।
महसुल "विश्व भरिको"
यो महसुल किन्न वा अपग्रेड (खैर, पहिलो संक्रमण नि: शुल्क छ) अक्सर क्षेत्र बाहिर स्थित छ जो कुनै पनि ग्राहक, हुन सक्छ। यो मुख्य लाभ जो रोमिङ देखि फिर्ता पछि सौतेली गर्न सकिन्छ भन्ने हो सदस्यता शुल्क, को कमी छ, र त्यसपछि आवश्यकताअनुसार तिनीहरूलाई पुन: प्रयोग गर्नुहोस्। को TP मा कल को लागत छ:6(युक्रेन, टर्की, युरोप र यसको अगाडी।);9(भियतनाम, इजरायल, इन्डोनेशिया); 36 rubles - अन्य देशहरूमा। देशहरूको पूर्ण सूची र तिनीहरूको इलाका मा गर्दा सञ्चार सेवाहरू लागत आधिकारिक मोबाइल अपरेटर गरेको पोर्टल मा जाँच गर्न सकिँदैन। विकल्प "विश्व भरिको", "मेघाफोन" पनि पढ्न अर्थमा बनाउँछ जो संग सुविधाहरू एक नम्बर छ।
महसुल "मेगाफन" "विश्व भरिको", समीक्षा जो अन्य देशमा, गृह क्षेत्र कल लागि disadvantageous दर छ, जबकि यो साँच्चै बचाउँछ भन्ने निष्कर्षमा नेतृत्व।
"विश्व भरिको" TP स्विच
तपाईं अर्को देश फर्काउने र अधिक डाटा योजना आवश्यक छैन, तपाईं कुनै पनि अन्य बन्द स्विच गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छन् भने। आफैलाई Familiarize संग मोबाइल अपरेटर कार्यालय वा कल-केन्द्र मार्फत, हाम्रो वेबसाइटमा प्रदान गर्दछ। महसुल परिवर्तन बाहिर टेलिफोन गरेर, इन्टरनेट ( "सेवा गाइड" को प्रणाली) भन्दा कम्पनी कर्मचारीहरु लगे छ।
विकल्प ( "मेघाफोन") "विश्व भरिको", कसरी असक्षम?
गर्दैन आवश्यक आफ्नो फिर्ती त्यस TP परिवर्तन, यो विकल्प को मामला मा विपरीत अन्यथा गर्न हुनुपर्छ। ( "मेघाफोन") "विश्व भरिको" सेवा बन्द संयोजन पछि * 105 * 708 *0#। "व्यक्तिगत खाता" सहायता डेस्क अपरेटर: अन्य उपलब्ध विकल्पहरू को व्यवस्थापनका लागि।
रोमिङ कम्पनी "मेघाफोन" "विश्व भरिको" बाट ग्राहक प्रयोग नगर्नुहोस् लागि विकल्प जो, तपाईं यसलाई बन्द गर्न सक्नुहुन्छ आफैलाई: दर (अपरेटर संग निष्क्रियता सम्झौता को3महिना पछि रद्द गरिनेछ) को प्रयोग गरेर रोक्न वा एक विकल्प अक्षम, उपयुक्त आदेशहरू प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसपछि, यदि आवश्यक, यो सम्भव नै अवस्था मा सेवा जडान गर्न छ। सक्रियता र आधिकारिक मोबाइल अपरेटर गरेको पोर्टल मा उपलब्ध विकल्प अवस्थाको लागत निर्दिष्ट गर्नुहोस्।
सिद्ध तरिका: इन्टरनेटमा निःशुल्क उपयोग कसरी गर्न
को "प्रतिज्ञा गरिएको भुक्तानी" ( "Rostelecom") कसरी सक्रिय
म कसरी "टन" अन्य पार्टी को ब्यालेन्स थाह: सबै सम्भव तरिकाहरू
रूसी संघ को संविधान को सामान्य विशेषताहरु। रूसी संघको संविधान: अवधारणा, सिद्धान्तहरू
कसरी वेभी केश बनाउन?
Klimov बोट इतिहास, उत्पादन, उत्पादन
सीलोन चाय संग्रह - अंग्रेजी Teas